Heshiiska berbera imaaraadku sagaal danood bay ka helayaan – innaguna dan qudha. Middaa qudha ma ka wadannaa? | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Heshiiska berbera imaaraadku sagaal danood bay ka helayaan – innaguna dan qudha. Middaa qudha ma ka wadannaa?
Published on July 11, 2016 by sdwo · No Comments
Rasheed Ali Meigag Samater) Hoggaamiyaha Jaaliyadda Somalida W.London-Ahna Xubin G.Dhexe EE UCID
Hubaal waxa ah in muwaadin kasta oo Somaliland u dhashay jecel yahay in waddankeennu horumar ka gaadho dhinac walba – dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba.
Waxan hubaa, inaanay ahayn bulshada Saaxil qaarkood oo keliya kuwa dareenkoodu liqi kari waayay qodobbada heshiiska ee dhinaca u janjeedha, oo ay jiraan muwaadiniin fara badan oo dareenkaasi la qaba, oo anigu aan ka mid ahay, hase ahaatee waxan jecelahay inaan xusuusiyo muwaadiniinta Somaliland oo dhan maahmaadii Soomalida ee ahayd:
“NINKA SAGAAL DANOOD KUGU WATA EE ADNA AAD MID KELIYA KU WADATO, MIDDAASUUN KA WADO”. Dantaasina waa sidan;-
– Somaliland oo aan ahayn waddan aqoonsi caalamiya haysta, oo heshiis maalgashi oo caymis (INSURANCE) leh lala geli Karta guud-ahaanba adduunyada ayaa saxeeday heshiiskan.
– Heshiiskan Imaraadku waxay isu arkaan inay Sharciyadii Maalgashiga Caalamiga ah (Merchantile Investment Laws) ka indha-qarsadeen, sidaa darteedna sad-bursi aanay waddan aqoonsi leh oo kale aan laga heleen ay ka faaiidaan heshiiskan.
– Heshiiskan xataa haddii dheefta la innaga badsado, waa dhiirri-gelin cad in xidhiidhyo cusub iyo Maalgashiyo hor leh ay ku dhiirradaan dawlado iyo shirkado waaweyni,taasoo Somaliland dan u ah.
– Waddankeenna, gobol walba iyo degmo walba, waxa ku duugan ama ku jira khayraad si gaar ah looga helo,una baahan soo saaris iyo maalgashi, hirgelinta heshiiskanina wuxu ka markhaati kacayaa in Somaliland tahay ummad dan iyo dalba ka dhexeeyo, lehna sharciyo, degaan walbana khayraadkiisa qolo,reer iyo qabiiltoona aanay gaar u lahayn.
– Fulinta heshiiskani wuxuu soo deddejin karaa aqoonsigeenna caalamiga ah ee aynu muddada dheer u samraynnay, oo laga helo saaxiibbo iyo dawlado dano gaar ahi inna dhexmaraan, heshiiskanina albaabada u furi doono.
– Tamar-darro, amase mad-madow kasta xukuumadeenna maantu ha yeelatee, heshiiskan oo sidiisa aynu u qaadanno, waxay caalamka kale u arkayaan, in Ummadda Somaliland leeyihiin xukuumad ka wada dhexaysaa, isla markaana shacbigoodu qaddariyaan heshiisyada caalamiga ah ee xukuumadoodu (tan hadda iyo kuwa iman doonaba) ay la gasho ummadaha kale xataa haddii ay ka biyo-diidsan yihiin.
– Heshiiskan oo sidiisa u fulaa, wuxuu quus-goyn u yahay Xukuunadaha Somalia oo badiba ku andacooda in iyaga loo soo maro heshiisyada iyo maal-gashi kasta oo caalamiya, maadaama aan Somaliland haysanin aqoonsi guud.
– Dekeddeenna oo loo helo qalab, balladhin iyo adeegyo loo fidiyo maraakiibta maraysa Badda Cas, isla markaana maraakiibta leh caymisyada adduunyadu ay dalkeenna ku soo xidhan karaan, ayaa laga dhaxli karaa faaiidooyin ka badan haddii dekeddeennu 30 sannadood oo kale ahaato xaaladda ay maanta ku sugan tahay.
– Sida la shaaciyay jidka isku xidha Berbera-Togwajaale oo si tayo leh loo dhiso ayaa fursad u ah in Berbera ay la tartami karto dekedaha kale ee mandaqadda ku yaalla, iyo weliba faadooyin laga heli doono adeegyada loo fidinayo dalalka aan iyagu deked iyo badotoona lahayn oo Ethiopia ugu soo horrayso.
– Dantaas oo aan aad uga muuqan qoraallada heshiiska, ( Xukuumadda iyo dadka aqoonta dheeraadka ah lihiba runta shacabkooda ha u faahfaahiyaan) – waa dan dheefteeda aan aad loo miisaami Karin, iyo sagaal danood oo qeexan oo D.P World iyo Imaaradku helayaan ayaa Heshiiskan ku duugan -dantaa keliya darteed – aynu ku aqbalno kuna fulinno heshiiska D.P World iyo Berbera.